Ny toeram-pitrandrahana mpanjaka Solomon (ampahany 14) - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2015-01 mpandimby ny Magazine > Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 14)
Tsy afaka nieritreritra an'i Basil aho rehefa niteny ny Ohabolana 19,3 mamaky. Ny hadalan'ny tenany no manimba ny fiainany. Nahoana Andriamanitra no omena tsiny foana amin'izany sy pilloried? Basil? Iza no basilika Basil Fawlty no mpilalao fototra amin'ny fampisehoana hatsikana britanika tena nahomby Fawlty Towers ary nilalao an'i John Cleese. Basil dia lehilahy masiaka, tsy mahalala fomba ary paranoïde izay mitantana trano fandraisam-bahiny ao amin'ny tanànan'i Todquay any amoron-dranomasina, Angletera. Manala ny fahatezerany amin’ny hafa izy amin’ny fanomezany tsiny azy ireo noho ny hadalany. Matetika ilay mpandroso sakafo espaniola Manuel no lasibatra. Miaraka amin'ny fehezan-teny Miala tsiny izahay. Avy any Barcelona izy. Basil dia manome tsiny azy amin'ny zava-drehetra sy ny rehetra. Amin'ny sehatra iray dia very tanteraka i Basil. Misy afo ary i Basil dia niezaka nitady ny lakile mba hamoahana ny fanairana afo, saingy diso toerana ny lakile. Raha tokony hanome tsiny olona na zavatra (tahaka ny fiarany) izy amin'ny toe-javatra toy ny mahazatra, dia mamehy totohondry eny amin'ny lanitra izy ary mihiaka maneso hoe misaotra Andriamanitra! Misaotra betsaka! Tahaka an'i Basil ve ianao? Manome tsiny ny hafa sy Andriamanitra foana ve ianao rehefa misy zava-dratsy manjo anao?
Raha tsy mahomby fanadinana ianao dia lazao fa efa nandalo aho, nefa ny mpampianatra ahy tsy tia ahy.
Raha tsy manam-paharetana ianao, dia ve ianao tezitra?
Raha very ny ekipanao, moa ve noho ny referee nihena?
Raha manana olana ara-tsaina ianao, ny ray aman-dreninao sy ny zokinao ary ny raibe sy renibe foana no manome tsiny azy?
Ity lisitra ity dia azo tohizana mandritra ny fotoana tsy voafetra. Saingy misy zavatra iray iraisan'izy rehetra: ny fiheverana fa ianao ihany no iharan'ny tsy manan-tsiny. Ny fanomezan-tsiny ny hafa amin'ny zava-dratsy dia tsy ny olan'i Basil fotsiny ihany - efa latsa-paka lalina ao anatin'ny toetrantsika sy ao anatin'ny tetiaranay izany. Rehefa manome tsiny ny hafa isika dia manao izay nataon’ny razambentsika. Rehefa tsy nankatò an’Andriamanitra izy ireo, dia nanome tsiny an’i Eva sy Andriamanitra i Adama noho izany, ary i Eva no nanome tsiny an’ilay menarana (1. 3:12-13).
Fa maninona no nanao toa azy ireo? Manampy antsika hahalala izay nahatonga antsika ho ankehitriny ankehitriny ny valiny. Mbola mitohy izao scenario izao. Alao sary an-tsaina ity tranga ity: Satana dia tonga tamin'i Adama sy Eva ary naka fanahy azy ireo hihinana amin'ilay hazo. Ny tanjony dia ny hampihena ny drafitr'Andriamanitra ho azy ireo sy ho an'ireo olona izay narahiny. Fomba Satana? Lainga no nolazainy azy ireo. Afaka manahaka an'Andriamanitra ianao. Inona no hataonao raha toa ianao ka Adama sy Eva ary naheno ireo teny ireo? Mijery manodidina ianao ary mahita fa tonga lafatra ny zava-drehetra. Lavorary Andriamanitra, namorona tontolo tonga lafatra izy ary mifehy tanteraka an'ity tontolo tonga lafatra sy izay rehetra ao aminy. Ity tontolo lavorary ity dia mety ho andriamanitra tonga lafatra fotsiny.
Tsy sarotra ny maka sary an-tsaina ny hevitr’i Adama sy Eva:
Raha afaka ny ho tonga tahaka an'Andriamanitra aho dia tonga lafatra. Ho tsara indrindra aho ary hifehy tanteraka ny fiainako sy ny zavatra hafa rehetra manodidina ahy! Lavo tao amin’ny fandrik’i Satana i Adama sy Eva. Tsy mankatò ny didin’Andriamanitra izy ireo ary mihinana ny voankazo voarara tao amin’ilay zaridaina. Atakalony lainga ny fahamarinan’Andriamanitra (Rom 1,25). Mampihoron-koditra izy ireo, satria fantany fa lavitra an’Andriamanitra izy ireo. Ratsy kokoa - latsaky ny minitra vitsy lasa izy ireo. Na dia voahodidin'ny fitiavan'Andriamanitra tsy manam-petra aza izy ireo, dia very ny fahatsapana ho tiana. Menatra sy menatra ary voan'ny meloka ianao. Tsy vitan’ny hoe tsy nankatò an’Andriamanitra izy ireo, fa tsapany koa fa tsy lavorary izy ireo ary tsy mahafehy na inona na inona — tena tsy ampy. Ireo mpivady izay tsy mahazo aina intsony amin'ny hodiny ary ny sainy dia voasaron'ny haizina, dia mampiasa ravin'aviavy ho saron-tava, mampiasa ravin'aviavy ho akanjo vonjy maika ary miezaka manafina ny henatra amin'ny tsirairay. Tsy ampahafantariko anao fa tena tsy tonga lafatra aho - tsy ho hitanao hoe iza marina aho satria menatra aho. Ny fiainan'izy ireo izao dia mifototra amin'ny fiheverana fa tsy ho azo tiana raha tsy lavorary izy ireo.
Tena mahagaga ve raha mbola miady amin'ny eritreritra toy ny hoe: "Tsy misy dikany aho ary tsy misy dikany"? Ka eto isika manana izany. Nikorontana ny fahatakarany an’i Adama sy Eva momba an’Andriamanitra sy ny maha izy azy. Na dia nahalala momba an’Andriamanitra aza izy ireo, dia tsy te hivavaka aminy ho Andriamanitra na hisaotra azy. Nanomboka nanana hevi-diso momba an’Andriamanitra kosa izy ireo, ka nanjary maizina ny sainy ka nisavoritaka (Rom. 1,21 Baiboly Fiainana Vaovao). Toy ny fako misy poizina atsipy ao anaty renirano, ity lainga ity sy izay entin’izany dia niparitaka sy nandoto ny olombelona. Mbola ambolena hatramin’izao ny ravin’aviavy.
Ny fanomezana tsiny ny hafa amin'ny zavatra iray ary mitady fialan-tsiny dia saron-tava lehibe apetratsika satria tsy azontsika ekena amin'ny tenantsika sy ny hafa fa tsy misy afa-tsy lavorary isika. Noho izany dia mandainga isika dia manitatra sy mitady ny meloka amin'ny hafa. Raha misy zavatra tsy mandeha any am-piasana na any an-trano fa tsy hadisoako ny raharaha. Izahay dia manao saron-tava ireo hanafina ny fahatsapanay ho menatra sy tsy misy vidiny. Jereo fotsiny eto! Tonga lafatra aho. Miasa amin'ny fiainako ny zava-drehetra. Nefa ao ambadik'io saron-tava io dia izao manaraka izao: Raha fantatrao ahy ny tena toetrako, dia tsy ho tia ahy intsony ianao. Fa raha afaka manaporofo aminao aho fa manana ny fifehezana ny zava-drehetra aho, dia hanaiky sy ho toa ahy ianao.
Inona no azontsika atao? Vao haingana aho no very ny fanalahidin'ny fiarako. Nijery ny paosiko aho, tao amin’ny efitra rehetra tao an-tranonay, tao amin’ny vatasarihana, teo amin’ny tany, teo amin’ny zorony rehetra. Mampalahelo fa menatra ny miaiky aho fa nanome tsiny ny vady aman-janako noho ny tsy fisian'ny lakile. Raha ny marina, mandeha tsara ny zava-drehetra amiko, feheziko ny zava-drehetra ary tsy misy very na inona na inona! Farany, hitako ny fanalahidiko - tao amin'ny hidin'ny fiarako. Na dia nikaroka tamim-pitandremana sy naharitra toy inona aza aho, dia tsy ho nahita ny fanalahidin'ny fiarako tao an-tranoko na ny fananan'ny fianakaviako mihitsy aho satria tsy teo fotsiny. Raha mijery ny hafa isika amin'ny antony mahatonga ny olantsika dia mahalana no ahitantsika azy ireo. Satria tsy hita any izy ireo. Matetika izy ireny no mandainga tsotra sy manohina ao anatintsika.Ny hadalan’ny olona no mampaniasia azy, nefa ny fony dia tezitra amin’i Jehovah ( Ohabolana 19:3 ). Ekeo izany rehefa nanao fahadisoana ianao ary raiso ny andraikitrao amin'izany! Ny tena zava-dehibe dia ezaho hatsahatra ny tsy maha olona tonga lafatra anao araka ny fiheveranao azy. Atsaharo ny finoana fa raha ianao ilay olona tonga lafatra dia horaisina sy hotiavina ianao. Tamin'ny Fahalavoana dia very ny tena maha-izy antsika, fa rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana i Jesoa dia maty mandrakizay koa ny laingan'ny fitiavana misy fepetra. Aza mino izany lainga izany, fa minoa fa mankasitraka anao Andriamanitra, manaiky anao ary tia anao tsy misy fepetra - na inona na inona fihetseham-ponao, ny fahalemenao ary na dia ny hadalanao aza. Miankina amin'io fahamarinana fototra io. Tsy mila manaporofo na inona na inona amin'ny tenanao na amin'ny hafa ianao. Aza omena tsiny ny hafa. Aza atao basil.